सूर्य एक्सपोजर बाल्डनेस हुन सक्छ | प्राकृतिक कपाल रेग्रोथ र कपाल झर्ने उपचार
सूर्य कपालको लागि राम्रो छ तर धेरै धेरै खराब छ। ब्यालेन्स खोज्नुहोस्! हामी सबैलाई थाहा छ कि सूर्यको किरणले शरीरलाई आवश्यक भिटामिन डी प्रदान गर्ने जस्ता धेरै स्वास्थ्य लाभहरूमा योगदान पुर्‍याउँछ र धेरै अध्ययनहरूले हामीलाई यो प्रमाणित गर्‍यो कि सूर्यले हाम्रो शरीरलाई उचित कपाल विकास चक्रलाई कायम राख्न आवश्यक पोषक तत्वहरू प्रदान गर्न मद्दत गर्दछ। फर्ट
अक्टोबर 09, 2019 by माइकल खुरी
सूर्य कपालको लागि राम्रो छ तर धेरै धेरै खराब छ। ब्यालेन्स खोज्नुहोस्!
हामी सबैलाई थाहा छ कि सूर्यको किरणले शरीरलाई आवश्यक भिटामिन डी प्रदान गर्ने जस्ता धेरै स्वास्थ्य लाभहरूमा योगदान पुर्‍याउँछ र धेरै अध्ययनहरूले हामीलाई यो प्रमाणित गर्‍यो कि सूर्यले हाम्रो शरीरलाई उचित कपाल विकास चक्रलाई कायम राख्न आवश्यक पोषक तत्वहरू प्रदान गर्न मद्दत गर्दछ। यसबाहेक, केहि अध्ययनले यो पनि औंल्याएको छ कि कपाल खण्डन पनि भिटामिन डी को कमीको कारणले हुन सक्छ। त्यसोभए निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ पर्याप्त सूर्यको प्रकाश पाउँदै हुनुहुन्छ!
तर कति कति छ?
लगभग 15 देखि 30 मिनेट प्रत्येक दिन मात्र तपाईको कपाल स्वस्थ राख्न पर्याप्त छ कपाल विकास बढावा। कुनै लामो समय सम्म, तपाइँको खोपडीमा प्रत्यक्ष सूर्यको प्रकाश जोखिमपूर्ण हुनसक्दछ विशेष गरी सूर्यको सब भन्दा शक्तिशाली (11am देखि 4pm) समयमा। केही सूर्य लिनको लागि उत्तम समय 4pm पछि हो।
सूर्यले कपाल बिगार्न सक्ने कारणहरू के के छन्?
तपाईंको स्क्याल्पमा कपालको शाफ्ट तपाईंको कपालको त्यो अंश हो जुन तपाईंको छालाको कपालबाट फ्याँक्छ। डेलाइटले तपाईंको कपाल प्रोटीन बिगार्न सक्छ, तपाईंको छालाबाट भिटामिन ई र सी कम गर्न सक्दछ र धेरै जसो मौलिक तेलहरू सुखाइन्छ। परिणाम यस्तो छ: अधिक नाजुक कपाल र अधिक कुटिल देखिने कपाल। सूर्यले त्यस्तै गरी तपाईंको कपालबाट गीलोपन हटाउन सक्छ, यसले ड्रायर, फ्रिजियर र सतहमा बढी अप्रिय छोड्छ।
यदि तपाइँको कपाल सामान्यतया पातलो छ भने, तपाइँ सूर्यबाट जलेको संभावनामा उल्लेखनीय वृद्धि गर्दै हुनुहुन्छ। चरम घामको जोखिमले कपालको वृद्धिलाई असर गर्न सक्छ। तपाईंको टाउकोको कुनै उत्तेजना वा चोटले तपाईंको कपालको सम्भावित रूपमा अधिक पातलो पार्न सक्छ।
कपालहरू स्वस्थ राख्नको लागि सुझावहरू सूर्य नुहाउने क्रममा
नुन वा क्लोरीनयुक्त पानीबाट टाढा रहनुहोस्, यसले तपाईंको केश विघटन गर्न र सुक्खा बनाउन मात्र सक्दैन तर यसले तपाईंको छालालाई जलाउन सक्छ
आफ्नो कपाल moisturized र राम्रो हाइड्रेटेड राख्नुहोस्। यसको मतलब, प्रत्येक पटक एकै पटक यसमा केही पानी लगाउनुहोस्। त्यो मात्र होईन, तपाई आफैले हाइड्रेट गर्नु पर्छ र धेरै पानी पिउनु पर्छ।
घामबाट बचाउन टोपी लगाउँनुहोस् वा आफ्नो टाउकोमा कपडा राख्नुहोस्।
तपाईको कपालमा सनस्क्रीन नलगाउनुहोस्। यद्यपि त्यहाँ कुनै प्रमाण छैन कि सनस्क्रीनले तपाईको कपाल बिगार्न सक्छ, त्यहाँ सूर्य उत्पादन को लागी धेरै उत्पादनहरु छन् र ती मध्ये धेरैले बिभिन्न बिभिन्न अवयवहरु प्रयोग गर्छन जुन सामान्य छैन र केवल समयले बताउँदछ कि ती स्कल्पको लागि खतरनाक छ कि छैन।
पर्याप्त सूर्य छैन?
यदि तपाईं पर्याप्त घाम पाउँदै हुनुहुन्न भने, तपाईंसँग भिटामिन डीको कमी हुन सक्छ। धेरै अनुसन्धानहरूले देखाए कि हाम्रो शरीरमा भिटामिन डीको अभावले बल्टिंगलाई छिटो पुर्‍याउन सक्छ। एउटा काम भिटामिन डी नाटकले कपाल फोलिकल्स पोषण गरेर नयाँ कपाल विकास गर्न मद्दत गर्दछ। त्यस बिन्दुमा जब तपाईंको प्रणालीमा पर्याप्त भिटामिन डी छैन, नयाँ कपाल विकास रोक्न सकिन्छ।
तपाईंको प्रणालीमा भिटामिन डी को अभावका कारणहरूले घर भित्र धेरै नै समय खर्च गर्नु, धेरै सनस्क्रीन लगाउनु, र / वा आवश्यक पोषक पदार्थले भरिएको खाना नखान समावेश गर्दछ।
तपाईंलाई आवश्यक भिटामिन डी कसरी प्राप्त गर्ने
सूर्यबिना भिटामिन डी पाउने उत्तम तरिका भिटामिन डी सप्लीमेन्ट, मल्टिभिटिमन्स र पक्कै भिटामिन डीमा समृद्ध खाना हो। केश को लागी राम्रो खाना र पोषणयुक्त प्राकृतिक रूपले धनी। साल्मन, माछा तेल र पशु बोसो महान स्रोत हो। तर तपाईं भिटामिन डीको साथ सुदृढ खाद्य उत्पादनहरू खान सक्नुहुनेछ, जस्तै केहि अनाज र दुधहरू।
baldnessकपाल बिग्रिनुकपाल हानिकपालकपालमा घामभिटामिन डी को कमी